ထူးအိမ်သင် သီချင်းများ | စိုးကိုဦး(နည်းပညာ-ထားဝယ်)
MCC Computer Networking Sales&Service Center(Dawei)
mazio setup 1.2.1
Virtual Girl 1.1.0.38
Antivirus Softwares များ
bootable software များ
USB & WINDOWNS
Cafezee Software များ
CCProxy 7.2+ keygen
Crack and Key maker
Cyber Power Audio
Dota War Key
Easy Hi.Q Recorder
FL Studio 6.0
A fonts for Window
Hacking Software များ
Hash Kracker v1.0
Laptop repair tutorials
Portable Software များ
Recyler virus remover.bat file
Registery Cleaner များ
Sony Vegas Pro V.8.0
Speed Connect Version80
USB Software များ
window7activatorDownload
DinkAid for Apple
Health Guide for Apple
i-Explorer for Apple
IM+ Pro v6.2.4
Unlock to Android4.2
Avenged Sevenfold MP3များ
Bonus Atreyu .mp3
IYAZ R&B သီချင်းများ
LINKIN PARK (HITS)
Myanmar &Myanmar Video
My Knowlodge is FREE:) ကျနော့် ဘလော့လေးတွင် ကျနော် ကိုယ်တိုင် လေ့လာရရှိသောအရာများတင်ထားသလို
Software Free Download for PC&Notebook ကွန်ပျူတာ အတွက်ဆော့ဝဲများ ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်သည်.....။
အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ရင်လည်း ကျနော့် (dragonfire.fire2030@gmail.com)ထံမေးလ်ပို့ ဆက်သွယ်
NETWORKING Networking ပိုင်း ၊Sever ပိုင်းတို့ နှင့်ပါတ်သက်ကာကျနော်သိသလောက်တော့မျှဝေပေးနိုင်ပါသည်။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအပိုင်းကိုလေ့လာနေဆဲသူတယောက်မို့ လို့ ပါ။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်
သူကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့Popဘုရင် အဆိုတော်ထူးအိမ်သင်
ဖြစ်ပါတယ်…ဘယ်လိုမှလိုက်ပီးတော့သူ့ ဆိုပေါက်ကိုတုပဆိုလို့ မရအောင်တော်တဲ့အနုပညာသမား
တယောက်ပါ…သူ့ သီချင်းတွေကို ကျနော် ဖြည်းဖြည်းချင်းအားလုံးစုံအောင်တင်ပေးပါ့မယ်
အကုန်လုံးတပြိုင်နက်မတင်နိုင်တာကတော့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပါဗျာ..ကျနော် တို့ ထားဝယ်မှာ
တွေကိုတင်ပေးနေတာပါ…ထိုငိး..တို့US မှာနေတဲ့သူတွေကတော့ Window Fileကြီတွေတောင်တင်
ပေးထားတာမျိူးတွေ့ ရပါတယ်…ကျနော်တို့ မှာတော့ ဒါမျိူးဆို ပါးစပ်လေးဟောင်းသရည်လေးကျပီးတော့
ငေးကြည့်နေရုံဘဲတတ်နိုင်ပါတယ်…အဲ သူတို့ဆီကယူမယ်ဆိုလို့ ရှိရင်လည်းယူလို့ မရပြန်ဘူးဗျ
ကဲ…အခုတော့ လိုင်းအခြေနေနေဲ့ ကြည့်ပီးတော့ နိုင်သလောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
နောက်တော့ ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေအားလုံးစုံသွားအောင်တင်ပေးပါ့မယ်….ဗျာ
စိုးကိုဦး (MCC Dawei)
7 Responses to ထူးအိမ်သင် သီချင်းများ
lulutun says:	August 16, 2012 at 6:34 pm	ကိုငှက်ကြီးဆုံးတယ်ကြားရတဲ့နေ့က စိတ်ထဲမှာအရမ်းဝမ်းနည်းမိတာပဲဗျာ။ ပုသိမ်မြို့ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂီတလောကကို ဆန်းသစ်စေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပုသိမ်သားဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူမိကြောင်းပါ။ သူ့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်အခွေထဲက မဟုတ်ဘဲ အတွဲအခွေတွေမှာဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းတွေကို သီးသန့်စုစည်းပြီး ထုတ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးနေမိတယ်။
Reply	စိုးကိုဦး says:	September 1, 2012 at 2:45 am	ဟုတ်ကဲ့…..မြန်မာပြည်ရဲ့ ပေါု့ဘုရင်လို့ တင်စားခံရတဲ့.ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းတွေကိုနောက်များကျရင်ကျနော်
Reply	submit url free says:	August 22, 2012 at 7:27 pm	Someone necessarily lendahand to make significantly articles I might state. That is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to create this particular publish amazing. Fantastic task!
Reply	sell vps, vps gia re, vps khung, vps pro, dich vu vps, vps us, vps vip, share vps, free vps, vps free says:	August 23, 2012 at 1:22 am	I do agree with all the concepts you have presented on your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for beginners. May you please prolong themalittle from next time? Thanks for the post.
Reply	khant su hlaing says:	September 11, 2012 at 12:42 pm	သီချင်းကောင်းလေးတွေပို့ပေးပါ
Reply	web marketing says:	September 17, 2012 at 7:49 pm	Thank you for some other informative web site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal means? I’veamission that I’m simply now working on, and I’ve been at the glance out for such info.
Reply	laptop cu,laptop cu gia re,laptop cu hcm,laptop gia re says:	November 26, 2012 at 1:22 am	Hello my friend! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I’d like to see extra posts like this .
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပုံတော်	ဒီဆိုက်လေးသည်ဗုဒ္ဓဘုရား၏မေတ္တာရိပ်အောက်တွင်တည်ရှိပါသေကြောင့်ရောက်လာသူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။။
ရှာဖွေရန် Logoပြောင်းလို့ ရသောဆိုက်သို့ 	FIND US ON FACEBOOK	FACEBOOK တွင်Like ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါ။
G-talk ပြောချင်ပါက…	ကျနော့် ဆိုက်လေးကို 20.4.2012 တွင်စတင်တည်ထောင်သည်။
သူ့ ဘ၀တွင်အတွေ့ 
"Look before you leap.
Think before you do"
Website လိပ်စာများ..	1. www.myanmarengineer.org
11. www.myanmaronlinezone.net 12.www.eyesforlife.ning.com
13. www.itmgmg.com 14.www.myanmarchatonline.com
15. http://myantel.co.cc 16.https://shweone.wordpress.com
17. www.saturngod.net 18.http://aungthulinn.ning.com
21. www.manawthar.com 22.www.mydigitallife.info
23. http://myatlone.blogspot.com 24.www.mmso.org
25. www.myanmaritresource.info 26.www.myanmardaily.net
27. www.myanmarglaxy.com 28.www.nyilynnseck.com
29. http://itmen.myanmarbloggers.org 30.www.nyinaymin.com
31. www.myanmarnlp.org.mm 32.http://alinyaung.org
34. http://foolit.forumotion.com 35.http://easywhois.com
37. https://daweithar.ning.com 38.www.itmyanmar.co.cc
39. www.magwaythar.co.cc 40.http://kotzp.co.cc
41. http://blackeagles.22web.net 42.http://linhtet.com 43.www.myanmarcupid.net 44.www.crystalrays.org
45. www.effectgenerator.com 46.www.soemin.net
47. http://lupyogyi.info 48.www.allchannel.com
49.www.mysuboo.com 50.http://mmblogpress.com 51.www.itworks.co.cc
52. www.engineer4myanmar.com 53.www.english4myanmar.com
54. www.royal-myanmar.com 55.www.autocad4myanmar.com
56. www.it4mm.net 57.www.myanmartraining.com
58. http://itexamcollection.com 59.www.certfiles.com
60. www.mmcybermedia.com 61.http://edumysteryzillion.org
62. www.mmgeeks.org 63.www.myanmarinternetjournal.com
64. www.creatingonline.com 65.www.mcpamyanmar.org
66. http://technical-seven.com 67.www.visualcertexam.com
68. http://mrdba.info 69.www.myanmarprogrammers.com
70. http://kozaw357.multiply.com 71.http://beta.eyeos.info
72. www.yatanarpon.com.mm 73.www.favoritus.com
83. http://student.mmblogs.net 84.www.dhammadownload.com
85. www.softlistnet 86.http://myanmaritzone.ning.com
87. http://mmopenlibrary.com 88.http://kopyai.ning.com
90. http://zawtk.mylovecafe.net 91.www.myanmarlensman.com
92. www.captainzero.webs.com 93.http://aungmyo21.multiply.com
94. http://tsmunpi.multiply.com 95.http://tgderic.multiply.com
96. http://thetnaing.myanmarbloggers.org 97. www.phyowaizaww.co.cc
98. http://www.fspro.net 99.www.targyi.co.cc 100.https://pyaephyonaing.wordpress.com 101. www.komyatmm7.co.cc
103.http://moetain1989.blog.friendster.com 104. www.naisithu.co.cc
105. www.konaymyo.com 106.www.ogresite.com
110. www.apytz.net 111.https://ktlinn2008.wordpress.com
112. www.zaylayworld.co.cc 113.www.zawlynnhtun.page.tl
114. www.mandalaygazette.com 115.www.tyalife.com
116. https://mmwordpress.com 117.www.worldwidemyanmar.com
118. www.planetcreater.net ( Eng Ver) 119. http://serversniff.net
120. www.windowsnetworking.com 121.http://mm3xpl0it.co.cc (zero)
126. www.myanmaritmen.com 127.http://pikay.myanmarbloggers.org
128. http://nyinyi.myanmarbloggers.org 129. www.waidar.co.cc
130. www.gipsy3.co.cc 131.www.zarnimaung.co.cc
132. http://kozin.yolasite.com 133.http://itmen.myanmarbloggers.org
134. www.photartay.com 135.http://yethusoe.mylovecafe.com
136. http://kanaung.com 137.www.mghla.net
Online Myanmar Dictionary	လာရောက်လည်ပတ်ကြသူများ	COUNTER PAGE
IDM Download Manager 6.11	အကူညီတောင်းရန်	မြန်မာဘလော့များစုစည်းမှု	Win Rar4.1 Download	Firefox 12.0 Latest Version	ပြောချင်တာများရှိခဲ့ရင်….	ဇော်ဂျီမြန်မာဖေါင့်(32-Bit)	ဇော်ဂျီမြန်မာဖေါင့်(64-Bit)	Emailလိပ်စာရေးခဲ့ပါ။	Subscribe via Email အသစ်တင်တိုင်းမေးလ်ဖြင့်ပို့ ပေးပါမည်။ နိုင်ငံအလိုက်ရောက်လာသူများ	ပြောကြားချက်များ စိုးကိုဦး: Yes,You can contact by looking tutorial video from အပြည့်အစုံဖတ်ရန် စိုးကိုဦး: နောက်..လည်းလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... အပြည့်အစုံဖတ်ရန် DyereeFat: Good design www.soekokooo.allalla.com. Offtopic: W အပြည့်အစုံဖတ်ရန် all about call of duty black ops: Magnificent publish, very informative. I'm wonderi အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ppc guide: Definitely consider that which you stated. Your fa အပြည့်အစုံဖတ်ရန် တင်ခဲ့သော Post များ	AIORemote : Remote Administration Tool (RAT) Download
Android 4.2 တွင် Beanflinger ဖြင့် Unlock ပြုလုပ်ခြင်း
Virtual Girl 1.1.0.38 Free Download
Gmail အသုံးပြုသူများ 10GB ဖိုင်များပေးပို့နိုင်
Hash Kracker v1.0 All-in-one Hash Passwaord Recovery Tool
ပြည်တွင်းတွင် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို Intel ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပေး သွားမည် Monday, 10 December 2012
နောင်လာမည့် မိုဘိုင်းဖုန်းစီမံကိန်းများ၌ 3G စနစ်ကိုသာချထားပြီး 2G စနစ်ကို ဖြုတ်သိမ်းမည်။
Team Viewer 8.0.16447 Final+Portable
Linkin Park Living Things (2012) New Album Download
New Version VZO Chat with Myanmar Version
Adobe Photoshop CS5 မြန်မာလိုစာအုပ်
Window Password Recovery Download
Laptop repair tutorials Files Download
NVIDIA Forceware Downlaod
ATI Catalyst Drivers Selection Download
mazio setup 1.2.1 ScreenShot Software Freedownload
Microsoft Office 2013 Freedownload with Serial Key
Real Desktop Freedownload
Facebook Send and Like Box
ဆရာဦးသက်အောင်+ဆရာမဒေါ်မီမီခိုင်နှင့်ညီလေးအောင်ကျော်(ပုသိမ်)တို့ အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်လျှက် Powered by WordPress